बाल्यकाल मा Neuropsychological सुधार: को व्यायाम, प्रविधी, सिद्धान्त, राय
Neuropsychological निदान र छोराछोरीको सुधार सामान्य र deviant विकास (ontogeny) को क्षेत्रमा सम्बन्धित विषयों बीच एक अग्रणी स्थिति कब्जा। काम उच्च मस्तिष्क कार्यहरु को स्थानीयकरण को एक गतिशील प्रणाली को अवधारणा मा आधारित छ। आज neuropsychological निदान र सुधार नयाँ व्यावहारिक क्षेत्र लागू हुन्छ।
Neuropsychological निदान र छोराछोरीको सुधार उद्देश्य छ:
unformed उच्च कार्य, compensatory सम्भावनाहरू को पहिचान को स्तर निर्धारण।
गठन र घाटा मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाहरू को विकास। यो बलियो लिंक मा परेर भण्डार गरेको र कार्यहरु बीच अन्तरक्रिया स्थापना द्वारा हासिल छ।
विशेषज्ञहरु मा neuropsychological सुधार केही सिद्धान्तमा आधारित छन्। सबै को पहिलो, तपाईं यी प्रविधी प्रशिक्षण रूपमा देखा छैन बुझ्न पर्छ। तिनीहरूले थप विकासका लागि आवश्यक हो कि मुख्य कार्य र प्रक्रियाहरू को गठन सुझाव। सुधार पृष्ठभूमि तत्व गर्न जोखिम सुरु। तसर्थ, गठन deficiental कार्यहरु मा एक अप्रत्यक्ष प्रभाव छ। कार्यक्रम मस्तिष्क प्रक्रियाहरू को विकास को डिग्री अनुसार डिजाइन गर्नुपर्छ। सदिश कार्यहरु गठन - माथि तल बाट, बाहिर भित्र बाट, दायाँ बायाँ। internalization प्रक्रियाको व्यवस्था - बाल्यकाल मा Neuropsychological सुधार मा आयोजित छ जो कार्यक्रम, को आधार। अभ्यास बिस्तारै थप जटिल बन्न गर्नुपर्छ र जिम्मेवारी पूरा मा बाहिर मद्दत - कम गर्न। फलस्वरूप, बच्चा आत्म-निर्देशित, पहिलो तैनाथ र त्यसपछि जोडेको निर्देशन गर्न संयुक्त उद्यम देखि उत्प्रेरित गर्छ। खेल को रूप मा प्रशिक्षण लागि कार्यक्रम प्रदान गर्नुपर्छ। यो तनाव को उन्मूलन लागि, प्रेरणा वृद्धि चोट बिना मस्तिष्क गतिविधि को दक्षता बृद्धि आवश्यक छ।
कार्यक्रम विकास सुविधाहरू
neuropsychological सुधार विधिहरू हरेक बच्चाको लागि व्यक्तिगत रूपमा चयन गरिएका छन्। यो गर्न, हामी डाटा एक क्रमबद्घ विश्लेषण सञ्चालन। उच्च कार्यहरु को संरचनात्मक सुविधाहरू देखि विकासात्मक विकार मा शिक्षा काम निर्देशन निर्भर हुनेछ। Neuropsychological निदान र बाल्यकाल को सुधार तीन कार्यात्मक ब्लक मस्तिष्क (अनुसार ए आर Lurii को अवधारणा संग) को प्रतिनिधित्व को आधार मा प्रदर्शन। विशेष ध्यान hemispheric अन्तरक्रिया स्थापना भुक्तान छ। यो सबै मानसिक प्रक्रियाहरू को सफल पाठ्यक्रम को लागि आवश्यक छ।
संज्ञानात्मक क्षेत्र विकास
यसको गठन जीवनको पहिलो दिनमा सुरु हुन्छ। पहिलो सानो व्यक्ति परिवार (घर) जीवनमा समावेश गरिएको छ। यहाँ उहाँले sensations को एक ठूलो रकम प्राप्त: उहाँले तिनीहरूलाई वरिपरि मान्छे, यो खुवाउनुभयो छ देख्नुहुन्छ, त्यो, शरीर विभिन्न स्पर्श महसुस आवाज, शोर, आदि सुन्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई विभिन्न उमेर मा मानसिक विकास असमान छ भन्ने ज्ञात छ .. उदाहरणका लागि, मोटर कार्यहरु को गठन भन्दा 1.5-2 वर्ष मा intensively। यो उमेर मा एक बच्चा आफ्नो शरीरमा संग, वस्तुहरू सामना गर्न सिक्दै छ। 1.5 वर्ष पछि, भाषण विकास सक्रिय भयो। बच्चा शब्दावली, वाक्यांश बोली विकास हुन्छ, प्रश्न र शब्द सृष्टिको अवधि निर्माण गर्न थाल्छ। प्रत्येक समारोह यो भन्दा intensively विकास जसमा संवेदनशील उमेर पारस्परिक रहेको छ। यसको गठन पछि, यो मानसिक प्रक्रियाहरू को जटिलता निम्न को विकास को लागि एक आधार रूपमा कार्य गर्न थाल्छ।
मूल मस्तिष्क ब्लक
उहाँले ऊर्जा मानिन्छ। पहिलो एकाइ स्नायु प्रणाली को इच्छित टोन प्रदान गर्दछ, wakefulness को सर्वोत्कृष्ट राज्य कायम गर्न मद्दत गर्छ। को जीव को सामान्य गतिविधि मात्र यसको स्थिर सञ्चालन यदि सम्भव छ। मस्तिष्क को पहिलो ब्लक को कार्य मा विकार निरन्तर बच्चा बाहिर, कुनै पनि गतिविधि गर्न प्ले, कार्यहरू पूरा गर्न अनुमति छैन।
यो मस्तिष्क शक्ति एकाइ गतिविधिको विकार को मुख्य लक्षण मध्ये एक छ। यस्तो अवस्थामा, बच्चा निष्क्रिय छ, यो वरपरका चासोको विषय छैन। आफ्नो संज्ञानात्मक र मोटर गतिविधि कम छ। यस्तो अवस्थामा निर्णायक महत्व बाल्यकाल मा Neuropsychological सुधार हुनेछ। व्यायाम गरेर, भावनात्मक र स्पर्श (ट्याक्टायल, श्रवण, भिजुअल) क्षेत्र लोकोमोटर गतिविधि को उत्तेजना गर्न निर्देशित हुनुपर्छ। खेल बच्चा ताल आन्दोलनहरु समावेश गर्नुपर्छ प्रस्ताव राखे। यस मामला मा, यो भावनात्मक सुदृढीकरण गर्न निश्चित छ। उत्तेजना लागि पनि एरोमाथेरापी, मालिश, पानी चिकित्सा प्रयोग गरिन्छ। संग बच्चा को वृद्धि गतिविधि व्यक्तिगत भावना, र आफ्नो झन् जटिल प्रणाली मात्र होइन प्रस्ताव गर्न सकिन्छ। एक निश्चित ताल राख्न बच्चा आवश्यक अभ्यास - बाल्यकाल मा Neuropsychological सुधार उत्तेजक underpin मुख्य तत्व। उदाहरणका लागि, यो सांगीतिक साथमा जाने वस्तु संग दिइएको तापमान मा, ट्रयाक र यति मा ड्रम मा एक बिट ट्याप हिड्ने हुन सक्छ। बच्चा एक ताल राख्न सिकेका एक पटक, त्यो आफ्नो पारी मा काम दिइएको थियो। फलस्वरूप, उहाँले परिवर्तन टिप्न र तदनुसार कार्य गर्ने प्रयास गरिएको छ। कागज पनि व्यापक neuropsychological सुधार (ए वी Semenovich कार्यक्रम) समावेश प्रविधी प्रयोग गर्नुपर्छ। यी विशेष मा, उचित साँस को गठन उद्देश्य गतिविधिहरु समावेश समावेश। बच्चाको सकारात्मक ऊर्जा पृष्ठभूमि प्रभावित कला चिकित्सा अर्थपूर्ण बनाउन।
सूचना मस्तिष्क ब्लक
उहाँले प्राप्त प्रशोधन र जानकारी भण्डारण लागि जिम्मेवार छ। शरीर को गतिविधिहरु विश्लेषक संरचना एक व्यक्ति, सुन्न हेर्न, सम्झना र जानकारी उर्तानु र अवस्थित डेटा संग तुलना गर्न अनुमति दिन्छ। यो एकाइ को उल्लंघन खराब पहिचान तस्वीर वा वास्तविक वस्तुहरू देखाइएको छ। गंभीर अवस्थामा, बच्चा छैन पनि खिलौने वा घरेलू वस्तुहरु उहाँलाई परिचित पहिचान हुन सक्छ। उल्लंघन aural धारणा बताउन भने, यो खराब ठाउँ मा उन्मुख छ, जो यो प्रकाशित विषयमा संग मेल गर्न ध्वनि स्रोत निर्धारण गर्न सक्दैन। बच्चा मा ट्याक्टायल अनियमितताहरु शरीर को एक विकृत दृश्य गठन गर्दा, तल ठीक र सकल मोटर कौशल को विकास slows। यो पनि मा विफलता उल्लेख गरेको छ आन्दोलनहरु को समन्वय।
यस्तो अवस्थामा रूपमा बाल्यकाल मा Neuropsychological सुधार प्रदर्शन? अभ्यास पहिचान केन्द्रित गर्नुपर्छ:
वास्तविक वस्तुहरू। एक बच्चा तिनीहरूलाई चिनन मा कठिनाई छ भने।
व्यावहारिक तस्बिरहरू। बच्चा छवि र वस्तु बीच पत्राचार निर्धारण गर्न सिक्छन्।
हल्ला तस्बिरहरू। बच्चा वस्तुहरु र आफ्नो दृष्टान्तहरू बीच सम्बन्ध स्थापित गर्न सिकेका भएपछि, समस्या जटिल छ। उहाँले एक योजनाबद्ध, रूपरेखा, कालो र सेतो वा हल्ला तस्बिरहरू प्रस्ताव गरिएको छ।
छवि निर्माण। यस मामला मा बच्चा तत्संबंधी एक खण्ड को तस्वीर पहिचान गर्न सिक्न।
श्रवण धारणा को विकार
यस मामला मा, मानसिक मंदता संग बच्चाहरु को neuropsychological सुधार जब भेद समावेश:
प्रकृति को अशाब्दिक संप्रेषण ध्वनि। खेल को पाठ्यक्रम शिक्षक झर्ने वस्तुहरू द्वारा मारा, र यसको अगाडी ढोका, creaking, पानी हल्ला गर्न बच्चा परिचय। यी सबै बच्चा तपाईंको आफ्नै सिर्जना र स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ सुनिन्छ, त्यसैले कार्य र हल्ला बीच जडान छैन। यो दायरा पछि सुनुवाइ धारणा बढेको हुनुपर्छ। बाल छुट वाद्ययन्त्रहरू वा खिलौने र यति मा।
बोली ध्वनि contrasting। बाल, मा र भाषण रुचि हुन सक्छ विभिन्न शोर भेद सिक्न। उहाँले अझै पनि पूरै शब्द र वाक्यांश पहिले नै dissimilar ध्वनि बीच भेद गर्ने स्थितिमा बुझ्न सक्छन्, तर। उदाहरणका लागि, वयस्क बोलीमा - स्वरवर्णको र consonants। एक बच्चा यो सर्प (ध्वनि "एसएच एसएच एसएच") वा विमान ( "ऊ-ऊ-ऊ") आउँदै, अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। यो कार्य पछि जटिल छ। बच्चा प्रत्येक अन्य ध्वनि नजिक बीच भेद गर्न सिक्छन्। त्यसपछि कक्षा मा उहाँले सरल शब्दांशहरू दलदल गर्न सुरु जहाँ खेल, प्रविष्ट ( "प्र", "द्वि-द्वि", आदि)। गाह्रो बच्चा एउटा ध्वनि भिन्न शब्दहरू बुझ्न सिक्छन् जसमा कार्य हो। उदाहरणका लागि, उहाँले एक "कचौरा" र "भालु" र यसको अगाडी दिन आग्रह गरिएको छ।
बाल्यकाल मा Neuropsychological सुधार जटिल सरल देखि बाहिर छ। पहिलो, बच्चा सरल व्यक्तिगत शब्दहरू बुझ्न सिकाइएको छ। एक वयस्क को अनुरोध मा, उहाँले केही तस्वीर वा वस्तु दिन्छ। (- सरल देखि जटिल, two- वा तीन-चरण पनि) बच्चा त बुझ्ने र निर्देशन पालना गर्न सिक्छन्। प्रक्रिया, तपाईंले एक चंचल सन्दर्भमा अभ्यास समावेश गर्न आवश्यक छ। यस मामला मा, बच्चा कुनै पनि कार्य प्रदर्शन गर्दैन, र कार्य कार्य गर्दछ।
यस मामला, एक neuropsychological सुधार विचार। पहिलो स्थान मा व्यायाम, एउटा काम त्यहाँ हुनुपर्छ संवेदी विकास, बच्चा आफ्नै शरीरको एक फरक भावना प्राप्त हुनेछ जसमा। परिणाम यो एक समग्र दृष्टिकोण छ। शरीर को कुनै पनि भाग, यो के गर्छ, जो स्पर्श को अर्थमा देखि उत्पन्न जहाँ बच्चा स्पष्ट बुझ्नुपर्छ।
छोराछोरीको सिक्ने कठिनाइको Neuropsychological सुधार एक विशेष विषयमा बच्चाको ध्यान ध्यान उद्देश्य छ। अवलोकन गर्दा धारणा को एक च्यानल प्रयोग गरेर प्राप्त स्मृति सामाग्री निपटने, अन्य विधि द्वारा प्राप्त डाटा उर्तानु गर्ने क्षमता छ भनेर देखाउँछ। बस राख्नु, को सुनुवाइ मा खराब जानकारी सम्झना गर्ने बच्चा, सजिलै स्मृति देखि 5-6 तस्वीर आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ। तर अक्सर बच्चाहरु यी क्षमता प्रयोग गर्न सक्षम छन्। Neuropsychological सुधार खातामा स्मृति को विकास को कालक्रम लिएर प्रदर्शन गरिएको छ। सुरुमा, यो बच्चाको लागि भावनात्मक अर्थ छ कि मान्छे र घटनाहरू देखिन्छ। त्यसैले, पहिलो र मुख्य मानिसहरू बीच उहाँले आफ्नो आमा, त्यसपछि पहिचान कसलाई तपाईंलाई केही अनुभव बताउन ती (कसैले साथ उहाँले खेल्न रुचि, कसैले को डर छ)। पहिलो, सरल, त्यसपछि जटिल खेल - सत्र स्मृति मा जानकारी मजबूत हुनुपर्छ। तपाईं कविता, जिब्रो Twisters गीतहरू र यति मा को एक किसिम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यो गतिविधि सबै क्षेत्रहरू मा नै प्रकट। बच्चा को रोचक खेल मा पनि ध्यान गर्न सक्षम छ, उहाँले कुनै पनि हल्ला गरेर विचलित छ (हावा विन्डो, एक खसेको वस्तु र यसपछी बाहिर।)। Neuropsychological सुधार पनि खेल समयमा बाहिर छ। पहिलो, विशेषज्ञ बच्चा उहाँलाई रोचक कि वस्तुहरु र खिलौने निर्धारण बताउँछ। तिनीहरूले बच्चा गरेको ध्यान आकर्षित गर्न सक्छन्। अर्को, बच्चा केही रोचक खेल छोटकरीमा ध्यान केन्द्रित गर्न सिक्छन्। यहाँ चुनौती धेरै मिनेट को लागि ध्यान राख्न छ। शिक्षक यस अतिरिक्त प्रोत्साहन लागि प्रयोग गर्दछ। थप neuropsychological बच्चाहरु सुधार ध्यान वितरण मा कक्षाहरू पनि समावेश छ। उदाहरणका लागि, एक बच्चा एक, र केही खिलौने प्रदान गर्दैन। उहाँले उनलाई एक साथ अन्तरक्रिया गर्न सिक्छन्। फलस्वरूप, खेल थप रोचक बन्छ। अर्को, कार्य जटिल सकिन्छ: छैन यसरी गेमिङ ठाउँ वृद्धि, उहाँलाई अगाडि केही खिलौने राख्न, तर फरक दिशामा।
Neuropsychological सुधार: समीक्षा
बच्चा, नयाँ जानकारी बुझ्ने गर्न, वातावरण मा नेभिगेट गर्न सक्नुहुन्छ अन्य व्यक्तिसँग अन्तरक्रिया, उहाँले घटनाहरू बीच जडान पहिल्याउन, तिनीहरूलाई वर्गीकरण गर्न सक्षम हुन, को घटना र वस्तुहरु बीच मतभेद र समानता निर्धारण गर्नुपर्छ। दृश्य-मोटर सोचाइ विकास - पहिलो चुनौती neuropsychological सुधार हाल्छ। समीक्षा विशेषज्ञहरु र आमाबाबुले व्यावहारिक प्रशिक्षण बेला बच्चा मा ठाँउ लिन्छ भन्ने:
विभिन्न वस्तुहरूको जागरूकता कार्यक्षमता।
वस्तुहरु र आफ्नो आकार को बीच मतभेद र समानता बारे विचार को गठन।
घटनाहरू बीच कारण-र-प्रभाव सम्बन्धमा बुझ्न।
कार्य गर्दा स्थानिक दृश्य क्षमता को विकास मा, अवलोकन बच्चा छवि, विषय र शब्द समझ गठन गरिएको छ भनेर देखाउँछ, उहाँले संकेत गर्नुभयो। अझ परिष्कृत स्तरमा, यो दृष्टान्त र घटना बीच सम्बन्ध स्थापित गरिएको छ। कुराकानी गर्न यसलाई प्रयोग गर्ने छैन ती बच्चाहरु, चित्र को मद्दतले इच्छा व्यक्त गर्न सिक्न। फेशन दृष्टान्त र यति मा - उदाहरणका लागि, बच्चा पिउन चाहन्छ भने उहाँले एक कप को वयस्क छवि, पैदल यदि देखाउँछ। जब असंबादी बच्चाहरु संग अन्तरक्रिया जीवन र संचार आयोजना यस तरिका प्रयोग गरिन्छ। साथै, बच्चा दृश्य चित्र र श्रृंखला को अर्थ बुझ्न थाल्छ।
तेस्रो मस्तिष्क ब्लक
उहाँले कार्यक्रम, विनियम र जटिल गतिविधिहरु नियन्त्रण लागि जिम्मेवार छ। यो एकाइ धन्यवाद सक्रिय सजग मानसिक व्यवहार, कार्यक्रम र कार्य योजना को संरचना, साथै आफ्नो प्रदर्शन अनुगमन को संगठनले प्रदान गरिएको छ। यी कार्यहरु उल्लङ्घन गर्दै जसमा छोराछोरी, काम गर्दा, यो काम मात्र एक खेल को रूप मा बाहिर पर्छ भनेर मनमा महत्त्वपूर्ण छ। बच्चा सुन्न र कार्यहरू आफूले गर्न चाहेनन् कि प्रदर्शन गर्न, तालिका मा बस्न लामो समय हुने छैन।
यसलाई मानसिक गतिविधि गर्न महत्वपूर्ण छ। संचार असफल भएमा, कठिनाइ हुन वा आन्दोलन (खुट्टा र हात को अन्तरक्रिया, पैदल, आदि) को उपलब्ध समन्वय हुन्छ सक्छ। अर्को स्तरमा गैर-मौखिक संचार र मौखिक कार्य कठिन प्रक्रिया आगमन डाटा विश्लेषण बीच गठन भएको छैन। पहिलो चरण एक साधारण मोटर समन्वय विकास हो। यो उद्देश्य लागि विभिन्न व्यायाम कार्यक्रम, आउटडोर खेल। आफ्नो आधारमा शरीर विभिन्न भागहरु बीच अन्तरक्रिया को विकास मा थप काम गर्छ। नरम सामाग्री प्रयोग संग बच्चा कक्षाहरू संग समानान्तर मा। उहाँले माटो वा plasticine को सरल मूर्तिहरु, दुई हातले आटा मुछ्नु कुँदनुहुन्छ।
कुल motility को स्तर मा एक बच्चाको बोली को गठन को निर्भरता experimentally साबित भयो। अध्ययन उपयुक्त उमेर गति को दायरा, छोराछोरीको क्षमता आफ्नो विचार व्यक्त गर्न भने ठूलो स्वरले पनि सामान्य दायरामा हुनेछ भनेर देखाउँछ। कारण सामान्य र औंला-प्रकार मोटर विकास गर्न मस्तिष्क Cortex को दक्षता बढ्छ। शिक्षक fizkultminutok रूपमा भाषण चिकित्सा सत्र को मुख्य कार्यक्रम समावेश बच्चाहरु को एक बोली पछि पनि व्यायाम, प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
विश्राम अभ्यास सुधार को सबै चरणमा मा बाहिर छन्। उनको प्रदर्शन द्वारा संगीत सँगसँगै गर्न सकिन्छ। बच्चाहरु (को डेस्क मा) आफ्नो ठाउँमा प्रस्ताव आफ्नो टाउको मा आफ्नो हात राख्नु र आफ्नो आँखा बन्द छन्। तिनीहरूले पनि आफ्नो पछाडि चटाई जाने सक्नुहुन्छ आफ्नो पक्ष मा आफ्नो हतियार सुत्छन्, तल Palms। यस मामला मा, तिनीहरूले आफ्नो सहभागिता संग कुनै पनि कथा पेश गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ। उदाहरणका लागि, तिनीहरूले बादलले मा उडान गर्दै आफ्नो गाला मा न्यानो हावा महसुस। व्यायाम शब्दहरू संग पूरा गर्न सकिँदैन: "। खैर, हावा सुन्दर थियो, र हामी पृथ्वीमा फर्कन चाहन्थे"
logoritmike को व्यवसाय
विशिष्ट संरचना यसको व्यावहारिक सञ्चालन समयमा गठन। यसलाई समावेश:
सांगीतिक साथमा जाने वस्तु बिना आन्दोलन, पैदल विभिन्न प्रकारका मुछिएको।
, व्यायाम औंला एक विशेष स्वरको आरोह अवरोह अनुपालनको मानेर।
, Exhalation को बल जोड जो विश्राम तत्व संग व्यायाम, सास।
गीत इशाराहरू सँगसँगै छ।
Articulating व्यायाम व्यायाम नकल तत्व सहित।
अभ्यास quatrains आन्दोलनहरु प्रयोग गरेर।
भाषण चिकित्सा अभ्यास।
सबै अभ्यास अनुकरण गरेर प्रदर्शन गर्दै छन्। आफ्नो अनुहार देख्न सकून् भनेर ठाउँ छनौट गर्नुपर्छ शिक्षक प्रशिक्षण को प्रक्रिया मा हरेक बच्चा articulation र अनुहार आन्दोलनहरु बारम्बार सक्षम हुन। यो सबै एक सर्कल वा अर्धवृत बसे कि मनमोहक छ। यस मामला मा, बच्चाहरु शिक्षक, सिंक उहाँलाई उच्चारण र भौतिक दोहोरिन संग हेर्न राम्रो हुनेछ।
प्रशिक्षण को मूल्य
गर्न भएको बच्चाहरु हेर्दै को अनुभव को धेरै वर्ष द्वारा देखाइएको पूर्वप्राथमिक उमेर सामान्य बोली underdevelopment, थप सक्रिय, संयुक्त खेल मा विश्वस्त हुन्छन्। तिनीहरूले चाँडै त्यसपछि एक स्वतन्त्र गतिविधि हस्तान्तरण गर्दै जो नियम जान्न। थकान बच्चाहरु भावनात्मक जारी एक माध्यम रूपमा कार्य र अधिकतम सुधार र सिक्ने प्रभाव पुग्न अनुमति रोक्न अभ्यास खेल्दै। प्रिस्कूल लागि कक्षाहरू, त्यसैले अंतर रहन्थ्यो गर्न छ।
माथिको कार्यक्रम विश्वव्यापी हुन मानिन्छ। यसलाई बोली विकार, मानसिक मंदता व्यक्तिगत प्रक्रियाहरू को पृथक विफलताको स्पष्ट को एक एकदम भारी संयोजन विकार को एक ठूलो दायरा neuropsychological रोकथाम र सुधार को आधार मा निर्माण गरिएको छ। कार्यक्रम मा समावेश छन् भनेर तत्व, सफलतापूर्वक pupils शैक्षिक कार्यक्रम को विकास मा अफ्ठ्यारो अनुभव संग काम मा प्रयोग भएको छ।
छोराछोरीको मस्तिष्क समारोह को विकास को प्रारम्भिक स्तर सेट गर्न सुधारात्मक विकासात्मक कक्षाहरू आवश्यक सुरु गर्नु अघि। तदनुसार, जो तपाईंले काम गर्न चाहेको बिन्दु चयन गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, भद्दा बोली विकार को उपस्थिति मा उचित बच्चा को गतिविधि बृद्धि गर्न संगीत र संवेदी गतिविधिहरु सुरु गर्न छ। उल्लंघन व्यक्त गर्दा विकास धेरै ढिलो हुँदा, काम धेरै वर्ष लाग्न सक्छ। यी अवस्थाहरूमा, आधारभूत कार्यहरु को गठन मा प्रशिक्षण रोक बिना तपाईं जीवनमा प्राप्त कौशल को आवेदन ध्यान गर्न आवश्यक छ।
को उल्लंघन धेरै कुनै न कुनै छैन भने, चरण जो आफ्नै बच्चा पारित गरिएको छ, पहिचान गर्नुपर्छ। काम तिनीहरूलाई अन्तिम सुरु। तपाईं कार्यक्रम अनुक्रम अनुपालन मा स्पष्ट सकारात्मक परिणाम हासिल गर्न सक्नुहुन्छ।
एक नवजात शिशु नुहाउने कति गर्ने? नवजात हेरविचार
Herbalife: कम्पनी समीक्षा र oproduktsii
पौराणिक कार: GAZ-21, Duesenberg, कैडिलैक। सबैभन्दा सुन्दर कार
यस नवजात मा एक stuffy नाक भने, के गर्ने?
स्लेट नङ: लक्षण, वर्णन, फोटो
वारेन परिवार इतिहास: रियल Ghostbusters
प्रतिभा V5: समीक्षा र विनिर्देशों (फोटो)
के कारणहरू छोराछोरीको आँखा fester? के गर्ने?